GOORTA LA URURIYO NOOCYADA QABOOBAHA EE TUFAAXA LOOGU TALAGALAY KAYDINTA: MUDDOOYINKA AY TAHAY IN MIDHAHA LAGA SAARO (LAGA GOOYO) IYO WAQTIGA GOOSASHADA BILAABMAYSA XILLIGA JIILAALKA - BEERTA
Tufaaxa kala duwan ee xilliga qaboobaha: goorta la ururiyo iyo sida loo diyaariyo kaydinta? Talooyin loogu talagalay daryeelka geed geedka goosashada ka dib
Goynta noocyada xilliga jiilaalka ee tufaaxa waa nidaam hawleed ah oo u baahan shuruudaha kulamada, diyaarinta weelasha iyo goobaha lagu keydiyo miraha. Bannaanka beeralayda curdis ah perederzhivat on geedka, sababtoo ah kaas oo geedka tufaaxa la xiray mana u dulqaadan jiilaalka.
Goynta wakhtigu waa nuska dagaalka, si loo ilaaliyo tayada dhadhanka muddo dheer, waxaa lagama maarmaan ah in si habboon loogu diyaariyo kaydinta.
Noocyada miraha dillaaca goor dambe
Midhaha cusub ee tufaaxa jiilaalka waxay leeyihiin dhadhan isku dhafan iyo caraf udgoon. Waxay u bislaadaan dhammaadka Sebtembar ama bilowga Oktoobar, marka miraha kale la goosto. Noocyada laga soo qaaday laanta guga (ka hor inta aanuu barafoobin), waxay leeyihiin nolol shafeeco dheer.
Waxay leeyihiin miraha ballaaran oo leh heer sare ah macdanta, gaar ahaan potassium iyo birta. Tufaax waxaa jira pectin, fiitamiin B1 iyo B2, fiber fiber. Miraha waxay leeyihiin diir xoog leh, cufnaanta cufan ee saxarka. Waxay ku habboon yihiin kaydinta dheeraadka ah iyo gaadiidka.
Macluumaadka. In beerista warshadaha ee miro, noocyo tufaax qaboobaha qabsado aag ballaaran oo Geedaha.
Noocyada ugu caansan
Bogatyr - midab culus oo midab leh oo cagaaran cagaaran. Jirka waa macaan iyo dhanaan. Ripeness wuxuu yimaadaa dhammaadka Diseembar. Si aad u jarto tufaaxa waxaad u baahan tahay bisha Oktoobar, marka miraha ay horey u awoodaan in ay helaan casiirka ka hor inta aan dhaxalka koowaad.
Aport - Tufaax weyn oo casaan leh diir dhalaalaya ayaa leh hilib jajaban. Dhadhanka macaanku waa macaan, dhanaan, uumi cusub ama u diga casiir, marmalade, macaanka. Dalagga ayaa laga saaraa dhammaadka bisha Sebtembar, waxa uu ku dhacaa bil gudaheed.
Antonovka - kala duwanaanta jiilaalka hore, gaar ahaan caan ah. Tufaaxu waxay leeyihiin midab cagaaran-jaale ah, jidhku waa casiir leh, macaan iyo dhanaan. Qaado miro bishii Sebtembar. Haddii aan la haynin kaydinta saddex bilood.
Jonathan - Midabada wareegsan ee casaanka ah ee midab casaan leh oo leh sheen dhalaalaya. Jidhku waa macaan, oo leh jajab sare iyo caraf udgoon. Ururku waxaa lagula taliyaa dhamaadka bisha Sebtembar. Xaaladaha qabow, waxaa lagu kaydiyaa ilaa Abriil - Maajo, meelo diirran - illaa February.
Waqtigee ayaa loo qaadayaa kaydinta?
Tufaaxa xilliga qaboobaha waxaa la saaraa badhtamaha xilliga dayrta, waxaa muhiim ah in la yeesho wakhti uu ku dhammeeyo hawsha kahor inta aysan qabowga qaboobin. Si ka duwan sida noocyada kale ee tufaax, dhirta buuxda ee miraha loogu talagalay kaydinta dheeriga ah looma oggola. Waxay gaari karaan qaangaadhka macaamiisha ee aan ku jirin laanta geedka, laakiin sanduuqyada. Goosashada waxay bilaabmaysaa marka dhammaado bisha September.
Tufaaxu wali way adagtahay oo dhanaan, waxay ku jiraan xaddi badan oo istaarijin ah. Ka dib 2-3 bilood ee geedi socodka ah ee ku fulan, midhaha miraha dabiiciga ah ee kala duwan, macaan oo macaan oo u muuqda. Starch waa la gooyaa hidrolisis, waxay u beddeshaa sukrose iyo glucose. Tufaaxu wuxuu noqdaa mid macaan badan oo casiir leh.
Waqtiga dalagga waxaa saameeya xaaladaha cimilada. Xilliga xagaaga, miraha waxay u bislaadaan hore, xilliga qaboobaha, qaan-gaarnimada ayaa dib loo dhigaa dhowr toddobaad. Ka sokow jadwalka Khabiiradu waxay go'aaminayaan waqtiga aad u baahan tahay si aad u qaadato tufaax loogu talagalay kaydinta, iyada oo loo eegayo dhowr shuruudood:
da'da waa wakhtiga laga bilaabo ubax, adoo tixgelinaya heerkulka;
Waa ku filan inuu bannaanka u ogaado xeerarka asaasiga ah marka laga saaro tufaaxa kaydinta, si aanay u seegin Waqtiga ugu wanaagsan ee ururinta:
tufaaxyada si fudud ayaa looga soocaa laanta iyo weelka;
miraha waxay leeyihiin midab khafiif ah oo madow;
miraha way adag yihiin, weyna weynaayeen.
Golaha Marka cimilada fiican ee geedku jiro dhowr miro oo wanaagsan, waa calaamad muujinaysa in ay tahay wakhtigii lagu soo celin lahaa miraha loogu talagalay kaydinta.
Sida loo ogaado waqtiga dhabta ah ee aruurinta tufaaxa ee kaydinta:
Sidee loo soo qaataa miro?
Goynta miraha waxay leedahay shuruucda u gaarka ah, taas oo ka bilaabanta doorashada cimilada iyo wakhtiga maalinta habka qaadashada tufaaxa. Wixii noocyo xilliga jiilaalka ah ee lagu meeleeyay kaydinta muddada dheer, gaar ahaan Waa muhiim inaad raacdo xeerarka ururinta:
Ha u waraabin geedka ka hor goosashada.
Xulo inaad shaqeyso cimilada qalalan. Waxaa wanaagsan in la bilaabo casho marka dhoobada dhoobo. Miraha waa inay noqdaan kuwo qallalan, qoyaanku waxay keenaan faafidda cudurka.
First of dhan, tufaax ayaa laga jaray laanta hoose, si tartiib tartiib ah u dhaqaaqa taajkii.
Miraha aan la jiidi karin, laamaha ayaa waxyeello gaartay. Iyaga ayaa gacanta loo galiyay, wayna kacsan yihiin. Iyada oo tiknoolajiyadaan, asliga ah ayaa si tartiib ah looga soocaa laanta. Joogitaankeedu waa damaanad fiican ee kaydinta dheer.
Miraha waa lagaa saarayaa isla markaana ku rid weel si taxadar leh, isku day inaadan waxyeelleynin diirka iyo dusha daboolka.
Marka hore, waxay ka soo saareen tufaax dhinaca koonfureed ee geedka, halkaas oo ay hore u daadiyaan.
Digniin. Adigu ma aad dhali kartid geed si aad u hesho miraha laamihiisa sare.
Xaaladda marka midhaha ay waxyeello dhacday xilliga dayrta, lama soo saari karo kaydinta. Tufaaxyadani waxay si dhaqso ah isu leexiyaan waxayna ku dhuftaan miraha xiga.
Tufaaxyada ka soo jeeda qulqulka sare waxaa la jeexjeexay adoo isticmaalaya tallaabo-saarayaasha ama qalab gaar ah - jodbo. Kani waa dhisme balaastiile ah oo la iibsaday ama guri guri leh oo la gooyey cidhifyada. Waxay ku xiran tahay maqaar dheer oo kuu ogolaaneysa inaad si taxadar leh uga saarto miro. Gorma, miro khafiif ah iyo jarjar ayaa isla markiiba loo diiday shaqada.
Sida loo qaado tufaax loogu talagalay kaydinta:
U diyaargarowga tabarka jiilaalka
Ka hor inta aan la dhigin kaydinta wakhtiga dheer, tufaaxa waa in la tababaraa. Heerka koowaad waa kala soocidda. Miraha waxaa lagu doortaa iyadoo loo eegayo dhowr sifooyin:
cabbirka - yaryar, dhexdhexaad ah, weyn;
tayada - diirka oo dhan, maqnaanshaha dixirigga iyo waxyeelo kale, joogitaanka stem;
noocyada kala duwan - waxay ku xiran tahay kala duwanaanta, tufaaxu waxay ku kala duwan yihiin nolosha shelf.
Tufaaxyada waa inaysan ka tagin hawada ka dib goosashada muddo dheer, waxaa lagula talinayaa in ay isla markiiba u dirto dukaanka.
Golaha Baakada ugu fiican ee keydinta tufaaxa waa sanduuq alwaax ah. Ka hor inta beerto miraha waa in lagu nadiifiyaa xal of potassium permanganate iyo qalajiyey.
Sidee loo kaydiyaa loona xareeyaa?
Kaydinta muddada dheer ee tufaaxtu waa suurtagal marka ay heerkulku hoos u dhaco - 2-5 ° C. Qoyaanka qolalka qolka, waa inay ahaadaan 85-90%. In microclimate qalalan, miraha si dhakhso ah u leexin doonaa iyo hoos u.
Kontaroolada leh qoyan qoyan ayaa kaa caawin doona inaad ka fogaato tan. Haddii saldhig loo isticmaalo kaydinta, waa in la diyaariyaa. Samee nadiifinta, darbiga derbiyada leh xal of lime iyo naxaas sulfate. Nadiifintu waxay ka takhalusi doontaa bakteeriyada iyo fungi taas oo khatar gelinaysa xaaladda tufaaxa.
Tufaaxa waxaa loo dhigi karaa siyaabo dhowr ah:
Miro kasta waxaa lagu duuduubay warqad waxaana lagu dulsaaray asliga ah, waxaa lagu dhejin karaa dhowr lakab;
tufaax ku rusheeyeen ciid ama balka nadiifka ah, waa inaysan taaban midba midka kale, ku rid sanduuq 3-4 lakab;
ee bacaha balaastigga ah oo daboolan, tufaaxa waxaa lagu shubay 5-7 kg, lagu kaydiyaa dhulka hoostiisa ama daloolka waddada, daboolay dhulka.
Meelaha tufaaxa loo dhigi karo kaydinta waxay noqon karaan kuwa soo socda: qolka dukaanka, balakoonka, maqaasiinka, qaboojiyaha.
Waa muhiim! Tufaaxa waa inaan lagu kaydin meelo kale oo khudaarta iyo khudaarta kale. Waxay soo saaraan etylene, taas oo waxyeelo u ah alaabta.
Xilliga jiilaalka, miraha si joogto ah ayaa loo kormeeraa., tufaax jaban ayaa laga saaraa.
Sida loo badbaadiyo tufaaxa xilliga qaboobaha:
Daryeelka geedka goosashada ka dib
Daryeelka dayrta ee tartanka ah wuxuu ku kordhinayaa jiilaalka nabdoon iyo hadhuudh wanaagsan oo sanadka soo socda. Waxaa ku jira waxqabadyo dhowr ah.
Qoyaan ka buuxinta biyaha - ka hor inta jiilaalka dhulka waa in si fiican u qoyan. Tani waxay u oggolaaneysaa in xididada ay koraan oo ay isu ururiyaan nafaqooyinka. Fuuq-celin taxaddar leh oo qoto-dheer oo mitir ah ayaa ka hortagi doonta daadinta qaboobaha. Qiyaasta biyaha waxay ku xiran tahay da'da geedka tufaaxa: geedka yar yar wuxuu u baahan doonaa 50 litir, 100-150 litir jir ah.
Dharka ugu sareeya - Geedku wuxuu u baahan yahay inuu ku kobciyo ciidda leh Bacriminta potash iyo superphosphates. Waxaa lagu soo bandhigaa isla mar ahaantaana leh waraabinta, biyaha lagu kala diro. Qiyaasta: 50 g of chloride potassium iyo 100 g of phosphate 10 litir oo biyo ah.
Jilicsanaan jilicsan - Lichens iyo xoorto ayaa laga saaraa dusha sare ee jirku. Xayawaankii hore waxaa la saaraa cayayaanka qarinaya gadaashiisa.
Xakamaynta Cayayaanka - ku buufinta xalka urea waxaa loo isticmaalaa in laga saaro geedka tufaaxa ee qolofta. Dareemka Bordeaux wuxuu kaa caawinayaa in laga takhaluso fangaska (3%).
Qashinka - Nidaamka waxaa la sameeyaa dhamaadka bisha Nofembar. Halabuurka waxaa la diyaariyaa lime (2.5 kg), sulfate copper (0.5 kg), kaniinka dabka (0.2 kg) 10 litir oo biyo ah.
Mulching - ka dib ururinta caleenta oo qodaya carrada agagaarka geedka tufaaxa, ku shub mulch - compost, humus ama peat.
Beeralayda qaarkood waxay daboolaan jirridda iyaga oo ka shaqeynaya barafka iyo jiirka, laakiin tani lagama maarmaan maahan.
Tufaax - mid ka mid ah midhaha ugu fiican iyo caafimaad leh. Noocyada xilliga qaboobaha waxaa lagu kala soocaa qadar fara badan oo fiitamiin ah waxayna ku hayaan sifooyinkooda bilooyin badan. Miraha leh saxaraha macaan-macaan iyo maqaarka cufan waxay bixiyaan bannaanka u leh walxo waxtar leh illaa guga soo socda. Tufaaxa waa la wada cuni karaa cusbada ama la jarjarey ama la jarjarey, saxaraha, miraha la qalajiyey.